Iyo 17th Beijing-Tokyo Forum. Kudyidzana kutsva kwedhijitari pakati peChina neJapan
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Iyo 17th Beijing-Tokyo Forum. Kudyidzana kutsva kwedhijitari pakati peChina neJapan
The 17th Beijing-Tokyo Forum yakaitwa kubva Gumiguru 25 kusvika 26 muBeijing neTokyo online uye pasina Indaneti panguva imwe chete.
Yakabatanidzwa neChina International Publishing Group (CIPG) uye yekuJapan isiri-purofiti yekufunga tank yeGenron NPO, vatori vechikamu kubva kunyika mbiri idzi vakagovana mazano uye vakaita nhaurirano dzakadzama pamusoro pehupfumi hwedhijitari, hungwaru hwekugadzira (AI), kudyidzana kwehupfumi nekutengeserana, uye. kuchinjana kwetsika panguva yeforum yemazuva maviri.
Pachikamu chechikamu che17th Beijing-Tokyo Forum musi waGumiguru 26, nyanzvi dzeChinese neJapan dzakaita nhaurirano dzakajeka uye dzakadzama pamusoro petarisiro yekudyidzana kwenyika mbiri munharaunda yedhijitari neAI, uye vakabvumirana pane zvakakosha.
Sino-Japanese digitaalinen kubatana kunozvirumbidza tarisiro huru
Xu Zhilong, mupepeti-mukuru weSainzi neTekinoroji Daily akataura pamusangano uyu, "Kusimukira kwehupfumi hwemadhijitari hakusi kungovandudza tekinoroji kana zvigadzirwa, asi kuvaka hurongwa hwemagariro ehupfumi hwedhijitari."
Tatsuo Yamasaki, purofesa ane mukurumbira weInternational University of Health and Welfare akataura tariro yake yekuti puratifomu iyi inogona kutsvaga mhinduro kumatambudziko ane chekuita nenharaunda neramangwana rakagovaniswa revanhu, sekuchengetwa kwevakweguru munharaunda yakwegura, AI inogonesa mamiriro ekunze. shandura kutarisa, kuronda kabhoni tsoka kuburikidza neAI tekinoroji, kuderedza kushandiswa kwesimba, uye kubatanidza simba rechinyakare nehunyanzvi hutsva.
Pang Dazhi, mutevedzeri wemutungamiri weNetEase anotenda kuti chizvarwa chechidiki muChina neJapan chinosvika pakuziva tsika dzemumwe nemumwe kuburikidza nezvigadzirwa zvedhijitari, zvakaita semakapopopu, mitambo, mimhanzi nemabhaisikopo. "Kutaura zvazviri, zvichibva panhaka imwe chete yetsika uye tekinoroji inopindirana mukusimudzira kwemitambo, nyika mbiri idzi dzine nzvimbo yakakura yekubatana mumunda wetsika yedhijitari nehupfumi hwedhijitari."
Novel maitiro uye mamiriro ehupfumi hwedhijitari
Duan Dawei, Mutevedzeri weMutungamiriri Mukuru kuIFLYTEK Co.Ltd. akati, pane nzvimbo huru yekushandira pamwe pakati peChina neJapan mumunda weAI. “China neJapan dzinosangana nematambudziko akafanana munyaya dzedzidzo, kurapwa, kuchengeta vanhu vakwegura nedzimwe nzvimbo. Nekudaro, tinogona kukurukura nzira yekupa sevhisi iri nani kune veruzhinji kuburikidza neAI tekinoroji. "
Taro Shimada, Senior VP weToshiba corporation, akataura kuti kushandiswa kwedata rekushandisa kuri panjodzi yenjodzi dzinongoitika dzoga. "Vese China neJapan vakazvipira kuvandudza kuomarara kwekutengesa cheni kuburikidza nesainzi-tech. Kutarisana nekukatyamadzwa kweCCIDID-19, Logistics data inopa mikana nematambudziko. Kunzwisisa kwakasvikwa pakugovaniswa kwedata rekugadzirisa, kusimudzira kushandiswa kwedata rekutakura kune imwe nhanho. "
Jeff Shi, mutevedzeri wemutungamiri weSenseTime, akati AI inogona kubatsira kugadzirisa dambudziko rekuchembera rakatarisana neChina neJapan, kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwechigadzirwa. "AI inogona kubatsira kugadzirisa kushomeka kwechigadzirwa. Zvichakadaro, AI pachayo iri kuyedza kuvandudza budiriro nekudzikisa kuvimba kwayo nedata uye nevanhu. "
"Zero carbonisation" inowedzera kuburikidza nehupfumi hwedhijitari
AI inobatsira kugadzira zvinhu zvitsva senge macatalysts matsva, akadaro Junichi Hasegawa, COO wePreferred Networks. "Photovoltaic, hydraulic uye hydrogen simba ese anowanzo kukurukurwa masosi emagetsi, nepo ese ari echipiri magetsi masosi. Naizvozvo, kubuda kwekabhoni hakudzivisiki mukugadzirwa kwemasimba matsva aya uye nzira yekudzikisa kuburitsa kabhoni mukugadzira simba iri inyaya yakakosha. "
Mukuwedzera, nzanga yevanhu haiparadzaniswa nemakombiyuta. Maitiro ekudzikisa mashandisirwo emagetsi enzvimbo dzayo dzedhata uye kugadzira makomputa matsva ane hunyanzvi hwepamusoro uye kuburitsa kushoma kunofanirwawo kufunga nezvazvo.
"Kuburitswa kwekabhoni pasi rose kwakadonha nerekodhi 7 muzana muna 2020 kubva gore rapfuura nekuda kweCCIDID-19 denda," akadaro Liu Song, mutevedzeri wemutungamiri wePingkai Xingchen (Beijing) Technology CoLtd., "Zvisinei, zviitiko zvehupfumi zvakaita. kwete kumisa, chikonzero kusimudzira kwakasimba kwehupfumi hweInternet. "
Liu akati zviitiko zvepamhepo zvinogona kuderedza zvakanyanya kuburitsa kabhoni uku uchiona budiriro yehupfumi. Tinogona kutsvaga nzira nyowani pakuchengetedza simba uye kuderedza kuburitsa kuburikidza nekushandisa, kutapurirana uye kuchengetedza data mune ramangwana.
Dziviriro yedata uye chengetedzo yakatarisana
Hiromi Yamaoka, nhengo yebhodhi reFuture corporation, akataura kuti kugadzira AI kunofanirwa kugadzirisa zvinonetsa pakuunganidza zvakavanzika. "Kushandiswa kweAI kunoda kuunganidzwa kwedata remhando yepamusoro, iro rinosanganisira zvinhu zvekutonga data, kuchengetedza kuvanzika uye zvimwe zvinhu. Mukugadzira AI, zvinonetsa zvinofanirwa kugadziriswa. Pamusoro pezvo, kana zvasvika pakuyerera kwedata, nyika dzepasirese dzinofanirwa kusvika pakubvumirana kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwekuyerera kwedata, "akadaro.
Liu akagovanawo zano pane iyi nyaya, achiti miganhu yechengetedzo yenyika uye kuvanzika kwemunhu inoda kutsanangurwa zvakajeka. China yakateerera kune hukama hwe dialectical pakati pekusimudzira uye kuchengetedzeka kwekuyerera kwedata.